Ny fampiasana tetracycline ho an'ny trondro - BALLYA
Posted on Aprily 18, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Antibiotika Tetracycline dia derivatives peratra naphthacene hydrogenated novokarin'i Actinomycetes. Antibiotika marobe izy ireo izay manakana indrindra ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria. Manana ny vokatry ny bakteria izy ireo ary ahitana karazany 6 ny ankamaroany, dia ny chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline, ary doxycycline, metacycline ary minocycline. Izy io dia manana karazana bakteria midadasika ary ampiasaina mba hisorohana na hitsaboana ireo trondro trondro voaangona. Io no karazana ampiasaina be indrindra antibiotika. Anisan'izany ireo antibiotika ireo tetracycline ho an'ny trondro dia tsy tototry ny biby tanteraka satria ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia mivoaka ao amin'ny tontolon'ny olombelona amin'ny endrika feses na metabolites.
Noho ny fitrandrahana rano tsara sy ny fihenan'ny biodegradatera ambany eo amin'ny tontolo iainana dia nanjary kilasin'ny antibiotika mora ny mitahiry sy manangona ao amin'ny tontolon'ny jono. Amin'ny maha-akora simika exogenous azy eo amin'ny tontolo iainana, ny antibiotika dia misy fiatraikany lehibe sy lalina amin'ny biolojika sy ny tontolo iainana momba ny jono, ka miteraka fanoherana zava-mahadomelina sy fandotoana mitohy. Tsy misy fiantraikany amin'ny famokarana ny indostrian'ny fiompiana anaty rano ihany izany fa mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olombelona sy ny fahavelomany ihany koa amin'ny farany.
Tetracycline ho an'ny trondro dia antibiotika. Tsy entina hitsaboana ny otrikaretina bakteria amin'ny trondro fotsiny izy io, fa mba hitsaboana ny aretina mikraoba amin'ny olombelona ihany koa. Rehefa ampiasaina amin'ny trondro dia heverina ho toy ny fitsaboana ny aretin-koditra eo an-toerana, toy ny fery na lo. Tetracycline no manampy tsara indrindra amin'ny sakafon'ny trondro. Rehefa voan'ny bakteria ny trondro dia tokony hojerena ny kalitaon'ny rano ao amin'ny fitoeran-trondro. Ho an'ny olombelona, ​​ny tetracycline dia azo ampiasaina amin'ny aretina maro, anisan'izany tetracycline ho an'ny mony, aretin-kibo, ary aretina hafa amin'ny bakteria.
Ny Tetracycline dia be mpampiasa na nanararaotra mihitsy aza tany amin'ny toeram-pitsaboana biby nandritra ny fotoana lava noho ny vidiny ambany sy ny fatran'ny bakteria lehibe. Ankoatr'izay, ny vokatra mampiroborobo ny antibiotika dia ampiasaina ho toy ny additive feed amin'ny famokarana. Izany dia mahatonga ny bakteria mora tohina manana fanoherana zava-mahadomelina maro karazana. Misy ny fanoherana ny zava-mahadomelina satria ny firafitry ny simika an'ity kilasin'ny fanafody ity dia mitovy, ka mampihena ny anjara asan'ny antibiotika.
Antibiotika Tetracycline dia antibiotika isan-karazany novokarin'ny actinomycetes, anisan'izany ny chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline ary Semi-synthetic derivatives of methenoxytetracycline, doxycycline- I methylaminotetracycline, sns., izay ny firafiny dia misy ny taolana naphthacene. Fanafody Tetracycline dia antsoina hoe noho ny peratra tetraphenyl hydrogenated mahazatra ao amin'ny firafitry ny molekiola. Antibiotika marobe izy ireo ary misy fiatraikany amin'ny bakteria miabo tsara, bakteria ramie-négatip sy spirochetes, rickettsiae, chlamydia, mycoplasma ary protozoa.
Ny rafitra miady amin'ny bakteria dia ny fanakanana ny tsy fitovizan'ny proteinina bakteria. Ity kilasin'ny fanafody ity dia afaka mamorona sira misy asidra na fotony. Saingy tsy miovaova izy amin'ny vahaolana aqueous alkale, noho izany dia amboarina amin'ny hidrôlorida. Ny fampiharana an-trano dia misy tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, doxycycline, metacycline ary minocycline. Ny telo voalohany dia vokatra voajanahary; ny telo farany dia vokatra semi-vita vita amin'ny solon, fantatra ihany koa amin'ny hoe tetracyclines vaovao.
Famantarana zava-mahadomelina: fitsaboana aretin'ny taovam-pisefoana, chlamydia, spirochetes, rickettsiae, eperythrocytes (kisoa), saingy tsy mahomby ny famerenana aretina staphylococcal sy streptococcal.
Ny fampidirana chlortetracycline amin'ny sakafo dia nampitombo ny taham-pamokarana atody, ny lanjan'ny atody ary ny hatevin'ny atody, ary nihena ny tahan'ny fihinana-atody, saingy tsy nisy vokany miharihary amin'ny fihinanana sakafo sy ny kalitaon'ny atody hafa tondro. Fahatsapana ara-pahasalamana: minocycline no matanjaka indrindra, doxycycline, chlortetracycline, tetracycline, arahin'ny tetracycline, ary oxytetracycline manana fahatsapana mahantra indrindra.
Ny fambara mahazatra ny aretina mikraoba ao amin'ny trondro dia misy ny fivontosan'ny maso na ny kibony, na ny teboka mena na teboka eo amin'ny hoditry ny biby. Manokana, tetracycline ho an'ny trondro dia ampiasaina hitsaboana aretina ivelany. Manolo-kevitra ny hitsaboana aretina lo. Azo ampiasaina ihany koa izy io hitsaboana ny fery amin'ny hoditra, ny karazana fitomboana na nodule, ary ny dian-kapoka misy loko isan-karazany amin'ny hoditra. Izy io koa dia ampiasaina hanasitranana ny herniation amin'ny ambaratonga, aretina iray amin'ny kirany trondro mipoitra tsy ara-dalàna ateraky ny aretina mikraoba.
Na dia tetracycline ho an'ny trondro afaka mitsabo ny olan'ny fahasalaman'ny trondro, zava-dehibe ny fiezahana mitady ny loharanon'ny olana. Ny kalitaon'ny rano, ny rafitra sivana ary ireo zavatra hafa ao amin'ny fitoeran'ny trondro dia tokony hojerena mba hahitana ny antony mahatonga ireo aretina ireo hanakanana ny trondro tsy harary indray amin'ny ho avy. Mba hisorohana olana ara-pahasalamana bebe kokoa dia mety ilaina ny mitsabo ny rano sy manadio ireo fitoeran-trondro. Rehefa mitsabo aretin-trondro dia azonao atao ny manampy ny tetracycline amin'ny trondro. Na dia tsy mety aza izany dia tsara ny miantoka ny tombotsoan'ny biby rehefa mihinana ny trondro voany antibiotika. Ny antibiotika dia azo ampiana amin'ny sakafo. Tolo-kevitra ny hanome sakafo ny trondro rehefa noana ampy izy ireo.
Raha afohezina, tablette tetracycline azo ampiasaina, ary tsy tetracycline ihany, fa fanafody hafa toy ny oxytetracycline, gentamicin, penicillin, sns dia azo ampiasaina amin'ny trondro. Ny ankamaroan'izy ireo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana squamousness, rotika amin'ny rambo, rotika gill, enteritis, ary bobongolo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny aretina trondro rehetra dia azo tsaboina, saingy kely dia kely ny vokany. Ny aretina trondro dia azo tsaboina tsara eo am-piandohana, fa ny vokadratsy fitsaboana dia tsy tsara amin'ny dingana manaraka.
Vokatry ny tetracycline-effets
Ny haavon'ny antibody ao amin'ny trondro dia voamariky ny valin'ny ELISA ary ny asan'ny phagosit dia norefesina tamin'ny famakafakana ny chemiluminescence ho toy ny famantarana ny valin'ny hery fiarovana tsy voafaritra. Ny valiny dia mampiseho fa ny oxytetracycline dia afaka manakana be ny haavon'ny antibodies, na dia mampihena kely aza ny asan'ny phagocytes sy ny isan'ny lymphocytes, saingy tsy misy vokany miharihary amin'ny taham-pahaveloman'ny trondro. Ny Oxytetracycline dia afaka manakana ny tampon'ny valin-kafon'ny karpa. Vetivety ihany io fanakanana io.
Toy ny fifantohan'ny oxytetracycline mihena, ny asan'ny sela miaro amin'ny karpa dia namboarina ihany koa. Oxytetracycline dia mety hanana genotoxisialy matanjaka amin'ny faritry ny fifantohana. Ny fandinihana dia nahitana fa i Tuyusu dia nisy fiatraikany teratogenika amin'ny embryon carp.
Ny fampiasana betsaka ny antibiotika dia mahatonga ny tontolon'ny jono tsy ho fitehirizan'ny fototarazon'ny fanoherana, fa koa fampitaovana fampitomboana sy fivoaran'ny fototarazon'ny fanoherana. Betsaka ny fanandramana nanaporofo fa ny fitomboana sy ny fielezan'ny fanoherana ny zava-mahadomelina ny aretina azo avy amin'ny tontolo iainana dia tsy maintsy iharan'ny loza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Miorina amin'izany, maro ny olona no nanomboka nandinika ny fikarohana momba ny fihenan'ny zava-mahadomelina sisa tavela (PNEC) ny bakteria eo amin'ny tontolo iainana, izay ampahany manan-danja ihany koa amin'ny fanombanana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny antibiotika sy antimicrobial synthetic.
Ankoatr'izay, ny fikarohana momba ny vokatry ny antibiotika tetracycline amin'ny mikraoba sedimenta sy ny firafitry ny ahidrano anaty rano sy ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo, indrindra ny fiatraikany poizina iraisan'ny tetracycline sy ireo loto hafa amin'ny tontolo iainana dia tsy fahita firy. Ary ireo fikarohana ireo dia hisy dikany kokoa amin'ny fanombatombanana ny fiarovana ny antibiotika tetracycline amin'ny tontolo iainana ekolojika amin'ny jono.
Ny fanararaotana antibiotika dia tsy vitan'ny hoe manohitra ny zava-mahadomelina ny pathogens fa indraindray misy fiantraikany amin'ny taranaka mandimby, ka mitarika ny fisian'ny "zaza mahatohitra". Ny fitomboan'ny fanoherana ny bakteria pathogenika amin'ny antibiotika mahazatra dia nanjary olana manerantany. Arakaraka ny fampiasan'ny antibiotika betsaka kokoa, ny safidy kely kokoa. Raha mihinana sakafo misy antibiotika matetika ny olona, ​​ary hitombo tsy fahatsiarovan-tena ny fanoherana ny zava-mahadomelina. Raha vao marary izy ireo dia tsy hanampy ireo antibiotika ireo. Ny toe-javatra matotra kokoa dia ny "bakteria super" vao tsy ela izay koa izay mifandray akaiky amin'ny fampiasana antibiotika be loatra.
Ny fihinanana sakafo maharitra maharitra be dia be dia tsy azo ihodivirana ka hiteraka fihenan'ny antibiotika, ary tsy azo odian-tsy hita ny fahavoazany. Manokana, ny fizarana antibiotika eo amin'ny olombelona sy ny biby dia hanafaingana ny fivoaran'ny fanoherana ny zava-mahadomelina ary amin'ny farany tsy hitondra antibiotika ho an'ny olombelona. Ohatra, ciprofloxacin dia antibiotika zarain'ny olombelona sy ny biby. Ny ciprofloxacin dia be mpampiasa mba hisorohana ny aretin'ny taovam-pisefoana ao amin'ny broiler sy trondro, izay mety hiteraka residu zava-mahadomelina mahery amin'ny sakafo. Misy ny tatitra any an-trano sy any ivelany fa tsy mahatsapa intsony ny olona amin'ny zava-mahadomelina ciprofloxacin. Izy io dia mety misy ifandraisany amin'ny fihinanana sakafo maharitra misy residu ciprofloxacin.
Ny fikarohana dia naneho ihany koa fa ny fanoherana zava-mahadomelina neonatal dia mety misy ifandraisany amin'ny fanararaotana antibiotika ataon'ny reny mandritra sy alohan'ny fitondrana vohoka, ary mety misy ifandraisany akaiky amin'ny fihinanana antibiotika maharitra azy ireo koa. Vehivavy bevohoka maro no mihinana atody, hena trondro, lasopy akoho, lasopy trotters ary ronono isan'andro, fa ny fiarovana ireo fanampin-tsakafo ireo dia mampiahiahy hatrany.
Rehefa jerena ny ny voka-dratsin'ny tetracycline fa ny antibiotika tetracycline dia afaka mamokatra, ny fampiasana ny tetracycline ho an'ny trondro Tokony hitandrina manokana hisorohana ny fahasimban'ny trondro, ny olombelona ary ny tontolo iainantsika.
University of Florida: Fampiasana antibiotika amin'ny fiompiana trondro haingon-trano
PubMed: Ny fiantraikan'ny fiompiana trondro rano velona amin'ny fiarahamonina misy bakteria tsy mahazaka tetracycline sy ny firafitry ny fototarazo fanoherana tetracycline ao anaty rano renirano